Spessartine - Spessartite - manganese noocyo aluminium ah - video
Iibso dukaanka dabiiciga ah 'spessartine' ee dabiiciga ah
Spessartine, mararka qaarkood si khalad ah ayaa loogu yeeraa "spessartite". Waa xayawaan, manganese aluminium aluminium, Mn2 + 3Al2 (SiO4) 3. Macdankani waa in aan lagu jahwareerin nooc ka mid ah dhagaxa dabka ah. Lamprophyre, oo loo yaqaan 'spessartite'.
Magaca Spessartine waa nooc ka mid ah Spessart ee Bavaria, Germany. Nooca nooca macdanta. Waxay badanaaba dhacdaa miro granit iyo noocyo dhagaxyo ah. Iyo in qaar ka mid ah phyllites metamorphic hoose. Ilaha waxaa ka mid ah Australia, sidoo kale Myanmar, Hindiya, Afgaanistaan, Israel, Madagascar, Tansaaniya iyo Mareykanka. Orange jaalle ah waa garoonta mandarin. Waxay ka timid Madagascar. Meelo casaan ah oo casaan ah oo caan ah oo ka soo jeeda Colorado iyo Maine, USA. Madagascar, majaajilooyinka ayaa laga faa'iideysan karaa xadhigooda ama alaamiyada. Qoryaha liinta ayaa ka soo baxa soodhiyam hodan ah. waxaa laga helay santuuq dalxiis oo ku yaal dooxada Sahatany. Waxaan guud ahaan ka helnay alluvium, koonfurta Madagascar ama sidoo kale gobolka Maevatanana.
Spessartine waxay samaysaa qaabab adag oo adag oo leh noocyada garnet ee alaabooyinka. Cabbirrada wanaagsan ee laga sameeyay taxanahan. Kala duwanaansho midabkeedu yahay midab casaan leh oo casaan leh oo casaan leh. Waxaa laga helay Latinka, Mountains Rhodope, Gobolka Kardzhali, Bulgaariya. Sida qashinka kale, waxay had iyo jeer dhacdaa sida isku dhafka leh noocyada kale. Gemska leh jimicsiga jirka ee sareeya wuxuu u muuqdaa mid hoy ah. Iyadoo inta badan kalluumeysiga uu keeno qalo kulul ama casaan.
Garnets waa koox ka mid ah macaadiinta macdanta. Waxaan u isticmaali jirnay tan iyo wakhtigii Bronze sida muraayadaha dhagaxyada iyo abrasives.
Dhammaan noocyada dharka ayaa waxay leeyihiin qaabab isku mid ah oo muuqaal ah iyo foomam macaan. Laakiin way kala duwan tahay ka kooban kiimikada.
Waxaa jira laba taxane ah oo ka mid ah kooxda garnet ee: taxanaha pyralspit iyo taxanaha taxanaha. In taxanaha pyralsaints A goobta waxay muujin kartaa bedelida isomorphous buuxa u dhexeeya Mg, Fe iyo Mn.
Halkaas oo ah taxanaha taxanaha ah goobta B waxay muujisaa isbedel isbedel ah oo u dhexeeya uvarovite iyo andradite laakiin kaliya xaddidan adag oo u dhexeeya kuwan iyo ciriiriga. Tani waxay soo ifbaxaysaa sababtoo ah safarka isboortiga ee Cr3 iyo Fe3 way isku mid yihiin oo aad ayay uga weyn yihiin tan AL3.
Noocyada Garnet waxaa lagu helaa midabyo badan oo ay ku jiraan casaan, sidoo kale casaan, jaalle, cagaaran, midab, bunni, buluug, madow, casaan, iyo midab lahayn, oo leh midab badan oo casaan ah.
Sababtoo ah kiimikada kiimikada ee garnet waa kala duwan tahay, xadhigaha atomiga ee noocyada qaar ka xoog badan kuwa kale. Natiijo ahaan, kooxdan macdanta ah waxay muujinaysaa xoogaa adag oo ku saabsan 6.5 ilaa 7.5.